ဆိုဖာများ၊ ဆိုဖာအဟောင်းတစ်လုံး၏အသွင်အပြင်ကိုမည်သို့တိုးတက်စေမည်နည်း - အိမ်
ဆိုဖာသည်သင်၏အိပ်ရာနောက်ကွယ်မှဖြစ်သည်၊ သင်ပိုင်ဆိုင်သောအရေးကြီးဆုံးပရိဘောဂဖြစ်သည်။ အလုပ်ကြာမြင့်ပြီးနောက်သင်၏ခြေဖဝါးကိုမြှင့ ်၍ Netflix မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုတက်ကာသူမမြို့ထဲပျံသန်းသောအခါသင်၏သူငယ်ချင်းကိုလက်ခံပါ။ သို့သော်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏အားသာချက်ကို ယူ၍ နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကောင်းမွန်သောဆိုဖာကိုအမှေးမှိန်မျက်စောင်းတစ်ခုသို့လျှော့ချနိုင်သည်။ သတင်းကောင်းကတော့မင်းအဲဒါကိုအစားထိုးဖို့အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားကိုမချလိုက်ရဘူး၊ ဒီအကြံပေးချက်တွေနဲ့မင်းဘဏ်ကိုမချိုးဘဲနဲ့အဲဒါကို (နီးပါး) အသစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
အိမ်မှာ microneedling ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
၁။ ခေါင်းအုံးများကိုပစ်ထည့်ပါ။ မင်းရဲ့ကျောရိုးကူရှင်တွေကပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေကိုတွေ့ခဲ့ရင်၊ ပြီးတော့မင်းကျောဘက်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ခေါင်းအုံးတွေကိုပစ်တာကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်၊ ​​သူတို့ကအဲဒါကိုအသစ်အဆန်းလိုဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးတော့မင်းရဲ့အမြင်ကနေကြည့်လို့မကောင်းဘူး၊ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ကူရှင်တွေကိုသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်။ အနားယူပါ။ ထောင့်တစ်ခုစီ၌နှစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲသင်၏ဆိုဖာအရှည်ကိုလုံအောင်ထည့်ပါ။
2. သုတ်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းမှန်တယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကူရှင်များနှင့်အတူဆိုဖာများအတွက်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အ ၀ တ်အသစ် (သို့) ဖျော့ဖျော့အင်္ကျီကိုအသစ်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန်သင်လိုအပ်သည်။ သင်လိုချင်သောအသွင်အပြင်နှင့်အရောင်ရရှိရန်အဆင့်တစ်ဆင့်စီကိုသင်သွားမည့် Pinterest တွင်သင်ခန်းစာများကိုသင်အလွယ်တကူရှာနိုင်သည်။
၃။ ကူရှင်များကိုအစားထိုးပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤအစွန်အဖျားသည်ချုပ်ထားသောကူရှင်များနှင့်ဆိုဖာများအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ဖြုတ်လို့မရတဲ့ကူရှင်တွေကိုပုံစံမကျဘဲရလဒ်ဖြစ်အောင်ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်အဲဒါတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစားထိုးဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ လက်မှုပညာစတိုးဆိုင်များသည် batting နှင့် foam များကိုအရွယ်အစားနှင့် ဖြတ်၍ သင်၏လက်ရှိ cushions ထဲသို့လျှောချနိုင်ပြီး online လက်လီအရောင်းဆိုင်များဖြစ်သည့် Amazon! - သင်အစားထိုးထားသောကူရှင်အဟောင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်မအစားထိုးမီတိကျသောတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန်သေချာစေပါ။
၄။ ၎င်းကိုခဲဖြင့်ပစ်ပါ။ စလစ်ဖုံးကိုမတတ်နိုင်ဘူးလား။ ဒါဆိုမင်းအကြိုက်ဆုံးပစ်တာကမင်းဆိုဖာဘေးကခြင်းတောင်းကနေဖယ်ပြီးမင်းရဲ့မသင့်တော်တဲ့ဆိုဖာကိုဖုံးဖို့အဲဒါကိုသုံးပါ။ မင်းဆိုဖာကပိုကြည့်ကောင်းရုံတင်မကဘဲပိုနူးညံ့သွားလိမ့်မယ်။
၅။ လက်နှစ်ဖက်ကိုအုပ်ပါ။ ကြောင်တွေရှိလား။ ထိုအခါမင်းဆိုဖာ၏လက်မောင်းများသည်ကျိုးပဲ့သွားဖွယ်ရှိသည်။ သင်ကစလစ်ဖုံးတစ်ခုရဲ့ပုံစံကိုမတူးဘဲမင်းဆိုဖာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့မတတ်နိုင်ရင်မင်းပိတ်မိနေသလိုခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဆိုဖာတစ်ခုလုံးကိုဖုံးဖို့ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံထက်မနည်းသောလက်နှစ်ဖက်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သောအ ၀ တ်အရောင်ဖြင့်သာဖုံးနိုင်သည်။ သင်တစ်ယောက်တည်းအိမ်တွင်ရှိနေစဉ်လက်နှစ်ဖက်ကိုဖယ်ပါ၊ ထို့နောက်ဧည့်သည်များအားဖျော်ဖြေသည့်အခါချက်ချင်းလန်းဆန်းစေပါ။
၆။ ခြေထောက်များကိုပြောင်းပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာဆိုဖာကအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းအဲဒါကိုရှစ်နှစ်ကြာအောင်လုပ်ပြီးတကယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်။ ၎င်း၏စက်ရုံခြေထောက်များကိုသင် online တွင်တွေ့နိုင်သောစိတ်ကြိုက်ခြေထောက်များနှင့်အစားထိုးပါ၊ သို့မဟုတ်အိမ်ပြုပြင်ရေးစတိုးတွင် ၀ ယ်နိုင်ပြီးအစွန်းအထင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်ဆေးခြယ်နိုင်သည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ခေတ်စားလာသော plus size အဝတ်အစား